Lanyard factory - China lanyard vagadziri uye vanotengesa
Lanyards ndeimwe yeedu makuru maunganidzwa, inova chinhu chakakurumbira kune mutengi wedu kusarudza kuratidza yavo yekumaka, logo panguva yemusangano, makirabhu, zviitiko zvekunze. Lanyards inogona kupihwa mumhando dzakasiyana-siyana senge polyester, kupisa kupisa, yakarukwa, nylon uye nezvimwe.Kunyangwe kubva kune zvakajairika lanyards, inogona kupa iko kushandiswa kwakakosha kwemalanyard akadai seakajairwa lanyard, anoratidzira lanyard, mabhodhoro ekuchengetedza mabhandi, tambo dzemakamera uye zvakadaro on. Zvinhu zvakasiyana, zvishongedzo zvinopa akasiyana mashandiro ere lanyard. Hazvina mhosva kuti inguvai dzaungade kushandisa, inogona kuwana lanyard dzakakodzera. Yedu yekutengesa timu inogona kupa iwo ehunyanzvi mazano sekuenderana nechikumbiro chako.
Imbwa Leashes Uye Makorari
Silkscreen Yakadhindwa Polyester Lanyards
Pfupi Sungira Nayo Iyo Carabiner
CMYK Kubvisa Kudhinda Lanyards
Zvinhu zvenaironi Lanyards
Kutevedzera Nylon Lanyards
Yakadhindwa Satin Lanyards
Yakarukwa Lanyards / Yakarukwa Lanyards
Yakarukwa satin lanyards